dating site isijamani abafazi namadoda ingaba ikhangela dating, friendship, iingxoxo kunye umtshato. Kuhlangana abantu ukusuka kwi-Germany, Austria, okanye Iswitzerland. Intlanganiso Tina kwaye Andreas
‘Ndifuna ndithi enkosi Tina a Andreas. Siyabulela kunye Matthias kwaye Lilian. Ngaphandle umsebenzi wakho kwaye kokuhluma kweliphepha, izakuba zithe ngokugqibeleleyo ukwenzeka kuthi ukwazi.»Malunga miles kuthi abanalo prevented. Sino yokubhala kuthi, thina phinda-phinda nge ividiyo. Sisebenzisa ngoko nangoko kwi-uthando!!! Lwethu lokuqala ividiyo incoko ithathe kuba iiyure. Ukusuka apho, singathi silindele kwakhona kwaye kwakhona ukuba baxoxe ngayo. Thina kugqitywe ukuya elula.»Molo abantu Tina kwaye Andreas! Xa sasivuya yokubhala okokuqala mini, ubomi bethu itshintshile. Akukho imini apho siya musa ukubhala.
Enkosi kakhulu. ‘Ukuba ukhe ubene ikhangela fun, friendship, ngesondo okanye umtshato, sibe uqinisekile ukuba uzakufumana ilungelo iqabane lakho kuba nawe, okanye uyonwabele ukuzama! Kubalulekile free ukubhalisa, ngoko ke, yintoni wena ulinde? Sayina kwaye nisolko ikhangela
← France Incoko
Yathetha kunye kubekho inkqubela-intanethi →